मैले स्पेनमा पाएको सफलतालाई फेलिक्सले दोहोर्याउन सक्छन् : रोनाल्डो – Nepal Insider
मुख्य पृष्ठ /खेलकुद/मैले स्पेनमा पाएको सफलतालाई फेलिक्सले दोहोर्याउन सक्छन् : रोनाल्डो
मैले स्पेनमा पाएको सफलतालाई फेलिक्सले दोहोर्याउन सक्छन् : रोनाल्डो
एजेन्सी, ८ भदौ । पोर्चुगलका स्टार खेलाडी क्रिस्टियानो रोनाल्डोले हालै मात्र एथ्लेटिको मड्रिड आएका जाओ फेलिक्सले स्पेनमा आफ्नो सफलता दोहोर्याउन सक्ने बताएका छन् । युभेन्टसका स्टार रोनाल्डोले टिभीआईसँगको अन्तर्वार्ताको क्रममा सहकर्मी फेलिक्ले आफ्नो सफलता दोहोर्याउन सक्ने बताएका हुन् ।
१९ वर्षीय फेलिक्स एथ्लेटिकोको कीर्तिमानी रकममा क्लबमा भित्रिएका हुन् । बेन्फिकाबाट अघिल्लो महिना १ सय २६ मिलियन युरोमा एथ्लेटिको आएका उनले प्रि–सिजनका खेलमा आफूलाई अब्बल साबित गरिसकेका छन् । युइएफए नेशन्स लिगमा पोर्चुगललाई फाइनलमा पुर्याउन महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएका फेलिक्सले स्पेनमा आफ्नो सफलता दोहोर्याउनेमा आफू विश्वस्त भएको बताएका हुन् ।
उनले अन्तर्वार्ताको क्रममा भनेका छन्, ‘फेलिक्सले स्पेनमा मेरो सफलता दोहोर्याउन सक्छन् ? मलाई धेरै नै विश्वास छ, किनकी उनी एक अब्बल खेलाडी हुन् । एक अब्बल खेलाडी भएका कारण उनले स्पेनमा मैले पाएको सफलता दोहोर्याउन सक्छन् ।’
‘तपाईँ बर्नान्डो सिल्भालाई पनि यस्तै अब्बल खेलाडीका रूपमा देख्न सक्नुहुन्छ,’ उनले थपे, ‘यद्यपि, सिल्भा अगाडिदेखि नै एक परिपक्व खेलाडी हुन् । अहिलेको फुटबलमा कसैलाई कसैसँग तुलना गर्न कठिन छ । हाल फुटबल जगतमा फरक–फरक क्षमता भएका खेलाडीहरू छन् ।’
यस्तै रोनाल्डोले फुटबल क्षेत्रमा धेरै पैसा भएको बताए । उनले भने, ‘जाओ फेलिक्सको कुरा नगरौँ । तर, यहाँ त्यस्ता खेलाडी पनि छन् जसले आफूलाई साबित नगरीकन पनि १०० मिलियन युराभन्दा धेरै कमाउन सक्छ । फुटबलमा धेरै पैसा छ । एउटा सेन्ट्रल र गोलकिपरले पनि ७० देखि ८० मिलियन युरो कमाउन सक्छ ।’
फेलिक्सले ला लिगामा भने गोल गरेका छैनन् । उनले ला लिगाको डेब्यू खेलमा गेटाफेविरुद्ध खेलेका थिए, एथ्लेटिकोकै घरेलु मैदानमा भएको सो खेलमा घरेलु टोलीले १–० गोलले जित निकालेको थियो । अब, एथ्लेटिकोले ला लिगाअन्तर्गत लेगानेसविरुद्ध खेल्दैछ । नेपाली समयअनुसार आज राति १०ः४५ बजे हुने यस खेल लेगानेसको घरेलु मैदानमा हुनेछ ।
‘ भ्र’ष्टहरुलाइ नाङ्गै पारेर आ’गो लगाउन सक्ने,तीन करोड नेपालिको ढुकढुकि रबि लामिछानेलाई प्रधानमन्त्री बनाऔ ‘ -आकाङ्क्षा पोखरेल
तीजको मुखमा सुनको मूल्य कति ? हेर्नुहोस् आजको बजार भाउ
तीन दिन लगातार वर्षा हुने, बाढी पहिरोको जोखिम उच्च
स्याङ्जा प’हिरो : ८ जनाको श’व निकालियो, १ जनाको जिवितै उ’द्धार